Iji na-etinye maka otu n'ime free tiketi, mkpa ka ị n'okpuru gị ngwa ka European Youth Portal na June. A juri ga mgbe igbunye 15,000 free ụgbọ oloko tiketi. Mgbe nke abụọ set of 15,000 tiketi e zubere ya ga-abụrịrị dabere na mmefu ego na nzaghachi si akpa 15,000 sonyere. The kpọmkwem ụbọchị maka n'ido ga n'etiti June 12 na June 26. Ị ndị rurula na-etinye maka a tiketi ma ọ bụrụ na ị ga- 18 afọ on July 1st. 1900 ndị a free ụgbọ oloko tiketi ga-ekenyela British ịbata. N'otu aka ahụ, France na Germany ga-enweta 1900 tiketi. Na ntule ndịiche, Irish ịbata ga naanị enweta 140 tiketi.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/free-trains-summer-teens/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)